For the time being, the EURJPY further decrease is still a possibility below the mid-127.00 level. “When the requirements of the forward guidance are satisfied, we will not hesitate to act,” UMongameli weECB Christine Lagarde said earlier on Friday. The EUR/JPY is about to end the week with a significant decline below the 127.50 regions.
I-EUR / JPY iyaqhubeka nokuhlala ngaphezulu kwe-130.74 umqobo wecala, ngoko ngokobuqu, ndiya kukhangela amathuba amatsha amade. Isibini semali sehla ukuze sivavanye kwaye siphinde sivavanye indawo yenkxaso. Ipateni ye-bullish apha ingenza umlenze omtsha usebenze phezulu.
Ngexesha elifutshane, i-stock index ye-Nikkei yayikwisigaba sokulungisa, yiyo loo nto i-Yen iye yaxabisa ngokuchasene neentshaba zayo. I-Yen ixabisa kancinci njengoko i-PPI yaseJapan ibhalise ukukhula kwe-8.0% ibetha i-6.9% elindelweyo.
Uhlalutyo lobuGcisa lwe-EUR / JPY!
I-EUR / JPY ayiphumelelanga ukuphinda iqalise kwakhona kwaye ngoku ibuyele kwindawo yenkxaso. Iphinde yaphinda yabuyisela umgca wecala lesiteshi kunye ne-130.74 kwaye ngoku ilwa kanzima ukuzala umlenze omtsha ophezulu. Iyahamba ngandlel' ithile ijonge ecaleni kwixesha elifutshane, yiyo loo nto sifuna isiqinisekiso esinamandla phambi kokuba sithathele ingqalelo ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane.
I-low low low, ukuvalwa kwe-bearish ngezantsi kwe-130.63 kunokuqalisa ukuhla okunzulu. Kwelinye icala, ukuhlala ngaphezulu kwe-130.74 kunokuzisa ujingi omtsha phezulu.
I-EUR / JPY inokuphuhlisa umlenze omtsha ophezulu emva kokuhlaziya indawo ye-confluence eyenziwe kwi-intersection phakathi kwe-130.74 kunye nomgca wecala.
tags YeEUR / JPY, Forex, ukuseta urhwebo
I-EURJPY iphulukana nesantya sayo njengoko isondela kwi134.12 ePhakamileyo phakathi kweNtengiso-yoMngcipheko
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Okthobha 22
I-EURJPY iyancipha intloni ye-134.12 Juni ephezulu ngosuku olungaphambili, inzuzo efana nenaliti ibonakala iqhubela phambili ekuchaseni kufuphi ne-133.72 ngoLwesine, okubangelwa ukuwa okuncinci kokulungisa. Umnqamlezo walungisa ezantsi ngolwe-Sihlanu kulandela ukuthanda okhoyo kokuwa okulungisayo. Isenzo sexabiso sasingathandeki, njengoko kubonakala ngokuhla Isitokhwe sase-US i-indices ye-0.06 ipesenti ukuya kwi-0.41 ipesenti, ngaphandle kwe-Nasdaq Composite, ephakame i-0.27 ekhulwini.
Amanqanaba okumelana: 134.50, 133.50, 132.50
Amanqanaba enkxaso: 132.00, 131.50, 131.00
NgoLwesihlanu, i-EURJPY ivule ngaphantsi kwe-132.45 kwaye inyukele phezulu kwi-132.79. Aba babini bahlehla, njengoko iibhere zavela kwaye abahwebi bagxile kumanqanaba angaphantsi kwe-132.00. Ukuphanda imeko ye-bearish, ukuwa okuqinisekileyo okungaphantsi kwe-132.00 kufuneka kusekwe. Isibini sinokuqhubeka nokuwa, kunye nabathengisi be-bearish bajolise kwindawo engaphantsi kwe-132.00 njengenjongo enokwenzeka.
Ukukhula ukusuka kwi-125.08 kuthathwa njengesigaba sexesha eliphakathi lokukhula ngaphakathi kwendlela yokuqinisa ixesha elide kwimbono ebanzi. Ngethuba nje inqanaba lenkxaso ye-128.00 ibambe, ukuzuza okungakumbi kulindeleke. Ukuqhawula okunamandla kwe-128.00, ngakolunye uhlangothi, kuya kuqinisekisa ukuba i-rebound evela kwi-125.08 iphelile, ibuyisela le nto iphantsi ekugxininiseni.
I-EURJPY isarhweba kuluhlu ukusuka phezulu kwi-133.48, kwaye i-intraday bias isekho phantsi. Ukuba umqobo wangaphambili kwi-132.00 ubambe njengenkxaso, ukunyuka okuqhubekayo kunokwenzeka. Ukuphindaphinda okuqinisekileyo okudlulileyo kwe-132.50, ngakolunye uhlangothi, kuya kubuyisela yonke inzuzo esuka kwi-128.00.
Inqanaba eliphakathi kwexesha le-133.50 liya kuba yinjongo elandelayo. Ikhefu lenkxaso ehlaziyiweyo kwi-132.00, ngakolunye uhlangothi, inokuguqula i-uptrend kwaye yandise uluhlu oluvela kwi-133.50 kunye nesigaba esitsha sokuhla.
I-EUR / JPY yokuqhubeka kwePateni!
I-EUR / JPY yehle kancinci kwixesha elifutshane, kodwa ukubuyela umva okwethutyana kuphela. Yehle isezantsi ngaphakathi kwiflegi encinci, ijelo elisezantsi. Ime kwinqanaba le-132.44 ngexesha lokubhalwa ngaphezulu kwe-132.15 yanamhlanje esezantsi. I-bias isasebenza, ke isibini sinokutsiba ngaphezulu nangaliphi na ixesha kwakhona.
I-Yen yaseJapan iye yaqina kakhulu mva nje njengoko i-Nikkei (JP225) iphinde yaqala ukukhula kwayo. Isalathiso sifumene ukuxhathisa okwethutyana kwaye ngoku sehle kancinci. Ukukhula okungaphezulu kweJP225 kunokubonisa ukuba iJPY inokuqalisa kwakhona ukuhla kwayo.
I-EUR / JPY yehlile emva kokusilela ukufikelela kumgca we-pitchfork ophezulu (UML). Kwakhona, isilele ukuhlala ngaphezulu kwe-132.51 static resistance. Okwangoku, ukubuyela umva, ukulungiswa kunokuba yinto yethutyana.
Ukwenza ikhefu elisemthethweni ukusuka kwitshaneli esezantsi iqinisekisa le pateni njengento eqhubekayo. Ukuvala nokuzinzisa ngaphezulu kwenqanaba le-132.54 kunye nokubhalisa indawo ephezulu ephezulu kunokubangela ukukhula okungakumbi.
Indawo ephezulu ephezulu, ukuvalwa kwe-bullish ngaphezulu kwenqanaba le-132.68 kunokubonisa ukukhula okunokubakho ubuncinci kude kube semgceni ophakathi (UML). Ukusilela ukubuyela ezantsi usiya kwindawo yeepivot yeveki ye131.64 unokubhengeza ukunyuka okuya kwi-R1 (133.59).
I-EURJPY ibanga iNqanaba le-132.00 kwaye iya ePhakamileyo ekupheleni kweVeki
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Okthobha 15
Ukunyuka kwe-EURJPY kuyaqhubeka ngokungagungqiyo, sele iwele umqobo obalulekileyo we-132.00 ngolwesiHlanu. Ireyithi yokutshintshiselana iyaqhubeka nokunyuka kwaye amanqanaba ngaphakathi kwe-134.16 ephezulu ukusuka kuJuni yinjongo elandelayo yesibini. Ngelixa uqoqosho lwe-eurozone luqhubeka, UMongameli we-ECB uLagarde walumkisa ukuba kunjalo “Kubalulekile” Inkxaso yomgaqo-nkqubo mayingarhoxiswa ngaphambi kwexesha.
Amanqanaba okumelana: 135.00, 134.16, 133.00
Amanqanaba enkxaso: 131.00, 130.50, 130.00
Kule veki, isaphulelo se-EURJPY sibonakala ngathi siphukile ngaphezulu kwe-132.00, sivumela uzinzo ngakumbi. Ukuphuma kulo mmandla kunokukhokelela kutyelelo kwiindawo eziphakamileyo ezili-134.16. Ukuba i-spike yokulungisa iyaqhubeka, isibini sinokuphinda sibuyele kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili kufutshane ne-134.16. Ngengqondo enkulu, ukwanda okuvela kwi-121.63 kujongwa njengenqanaba lesigaba sokwandiswa kwexesha eliphakathi kwindlela yexesha elide yokudityaniswa ngokudibeneyo.
Logama inqanaba lenkxaso eliyi-125.09 lihlala lingaguqukanga, kulindeleke ukuba kuzuzwe inzuzo ngokuzinzileyo. Ukuphumelela kwenqanaba le-131.00, kwelinye icala, kunokubonisa ukuba i-rally evela kwinqanaba le-121.63 ifikelele esiphelweni, ibuyisela ingqalelo kwi-low.
Emva kokufikelela kwinqanaba le-132.77, ngaphantsi kwenqanaba lokumelana ne-133.00, i-rebound ye-EURJPY iye yacotha. I-biad intraday bias ibuyele ekungathathi hlangothi. Ukuphumelela okungapheliyo kwinqanaba le-132.00, kwelinye icala, kunokubonisa ukuphela kolungiso kwinqanaba le-128.33.
Kunokubakho olunye unyango ukuphinda uzame le ncopho. Ukophula indawo eyi-132.00 esezantsi, kwelinye icala, kunokutyhala umkhwa ubuyele kokubi kwaye uye kwinqanaba lokuxhasa le-130.00. Ngawo onke amathuba, isibini se-EURJPY siya kuqhubeka nokudibanisa kwiseshoni ezayo yorhwebo.
I-EURJPY izinzisa phantsi kwe-129.00 emva kokunyuka kwamaxabiso e-Eurozone
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Okthobha 2
Ekupheleni kweveki, i-EURJPY ifumene isiseko sexesha elikufutshane kwi-128.54 kwaye ithengiswa ngezantsi nje kwenqanaba le-129.00. Ngeli xesha, emva kokuwa ukusuka kwindawo ephezulu kwinqanaba le-130.47, esi sibini sizinzile. Emva kokudodobala nge-1.35 yepesenti kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, imali eqhelekileyo ayikwazanga ukwenza isaphulelo esifanelekileyo ngoLwesihlanu. Ukunyuka kwamaxabiso kwi-Eurozone kuyaqhubeka, kubeka uxinzelelo olusezantsi kwi-EUR.
Amanqanaba okumelana: 130.50, 130.00, 129.50
Okwangoku, imeko ye-EURJPY yokuqhubeka kwesibini iyaqhubeka, njengoko isibini sithengisa ngoku e-128.74, ngaphantsi komndilili oshukumisayo u-5 no-13. .
Logama inqanaba lenkxaso le-127.93 ligcinwa, kuyaxelwa kwangaphambili ukuzuza. Kumanqanaba alandelayo ali-129.50, ikhefu eliyi-130.00 liya kufuna ukubuyiswa ukusuka kwi-127.93 (esezantsi) ukuya kwi-131.00. Ikhefu elisezantsi kwenqanaba le-128.50, kwelinye icala, linokubonisa ukuba ukubuyela umva ukusuka kwi-127.93 kudlulile kwaye kugxilwe kubuyiselwe kula mazantsi.
I-biad intraday bias ye-EURJPY ayilunganga njengoko ukudityaniswa okusuka kwi-130.47 kuyaqhubeka. Ixabiso kulindeleke ukuba liqhubeke ukusuka kwinqanaba lokuxhasa elincinci le-128.00. Imijikelezo emithathu ukuya kwinqanaba le-128.00 isenokuba iphelisile ukulungiswa ukusuka kwinqanaba le-131.00.
Inqanaba eliphezulu le-129.50 kufuneka liphindwe lilandelwe ukuba indawo encinci yokumelana ne-129.13 yaphuliwe. Ukophulwa kwenqanaba lenkxaso encinci kwi-128.29, kwelinye icala, kuya kwandisa ukulungiswa kunye nokunye ukwehla ukuya kwi-127.50.
I-EURJPY inyukela kwi-129.75 ePhakamileyo, apho kulindwe khona ukunganyangeki
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Septemba 24
I-EURJPY inyukile kwiseshoni yesibini ngokulandelelana ngolwe-Sihlanu, kuvavanywa ngokufutshane uluhlu olungaphezulu nje kwe-129.00. Izalathiso zexa elizayo ze-equity index ziyenyuka, zibonisa ukuba imeko yeemarike intle. Iingxaki zika-Evergrnade ziyaphela, nangona ukuphaphama kucetyiswa. Eyona mali inamandla kwintengiso yeFX yiponti yaseBritane kunye neyuro, ngelixa Idola yaseMelika lelona libuthathaka ebhodini.
Amanqanaba okumelana: 132.00, 131.00, 130.00
Amanqanaba enkxaso: 129.13, 128.29, 127.30
Ngengqondo ebanzi, ukunyuka kwinqanaba le-127.93 kuthathelwa ingqalelo njengesigaba esiphakathi ukuya kwixesha elide elonyukayo ngaphakathi kwendlela yexesha elide esecaleni. Inzuzo engaphezulu kulindeleke ukuba inqanaba lenkxaso le-128.00 libambe. I-EURJPY inokuqhubeka nokunyuka kwiseshoni elandelayo.
Ukophulwa kwenqanaba le-130.00 kunokujolisa ekubuyiselweni ngokutsha kwepesenti ye-61.8 (ephezulu) ukuya kwi-134.12 kwinqanaba elilandelayo le-121.61. Nangona kunjalo, ukophula okuqhubekayo kwinqanaba le-129.62 kunokuthetha ukuba ukukhula kuye kwafezekiswa kwinqanaba le-130.00, ukuphinda ujonge ingqalelo koku kusezantsi.
I-EURJPY izinza ngaphezulu kwe-129.13, ngenyanga ephelileyo ephezulu kwinqanaba le-130.17 kwaye ngoku ifikelele kwinqanaba elitsha kwinyanga yangoku kwi-130.74. Umbono wethemba kulindeleke ukuba ubambe ixesha elide njengezorhwebo ze-EURJPY ngaphezulu kwe-4 yeyure yokuhamba kwe-5 kunye ne-13.
Ngengqondo ebanzi, ukwehla ngokupheleleyo ukusuka phezulu kwe-130.74 kufanele ukuba kugqitywe kwinqanaba le-127.93. Ukunyuka ukusuka kwi-128.00 kunokujolisa ekubuyiselweni kwinqanaba le-134.12 ukuya kwi-127.93, nge-130.00 njengethagethi elandelayo. Ukwahlukana okuqhubekayo kunokwenzeka, kuzisa ithagethi kwinqanaba le-134.12 (phezulu).